အလုပ်ထုတ်ရှာဖွေနေခြင်းမပြုမီ, လူတိုင်းယေဘုယျအားဖြင့်စဉ်းစားတရာပိုက်ဆံသို့မဟုတ်လစာဖြစ်ပါသည်. ဟုတ်ကဲ့, စိတ်အားထက်သန်မှုအောင်မြင်မှုရဲ့ပေမယ့်တစ်နေ့တာရဲ့အဆုံးမှာဦးဆောင်ဘာလဲ, သငျသညျအိမ်ပြန်ပင်ပန်းသွားရသည့်အခါ, သင်လိုအပ်သမျှသောအချို့သောနှစ်သိမ့်ခြင်းနှင့်ဇိမ်ခံကားဖြစ်ပါတယ်. ဒါကြောင့်, ဒါကြောင့်အစားသေးငယ်တဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင် setting ထက်သင်နှစ်သိမ့်၌ရှိသမျှသောပစ္စည်းများတတ်နိုင်တဲ့အကြီးအအမြင့်မှာသင့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်နေရာကအမြဲတမ်းပိုကောင်းမယ့်. လစာနှင့်အတူအခွင့်အရေးတွေအများကြီးအတူပါလာသည်ဟုအချို့သောအလုပ်အကိုင်များရှိပါတယ်. Following isalist of some of the top career options that would support you efficiently both financially and prestige wise.
လက်ရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစဉ်မြေးဆက်အတွက်, မြင့်မားတဲ့ဂုဏ်သတင်းစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် multitasking ကိုကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အတူလူများအတွက်ဖွင့် built ထားပြီး. ဒါဟာ entry ကိုအဆင့်မှာတစ်ဦးအလွန်နှစ်သက်ခရီးမဟုတ်ပါဘူး. သို့သျောလညျး, သငျသညျပိုမိုမြင့်မားတာဝန်ဝတ္တရားများနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များတက်ယူမှတက် step သည့်အခါ, သင့်ရဲ့လစာကြီးထွားနေကြတယ်. သငျသညျမလိုအပ်အားလုံးတစ်ဦးကိုကောင်းကောင်းသိအဖွဲ့အစည်းကနေစီမံခန့်ခွဲမှုဒီဂရီဖြစ်ပါသည်. ဤသည်စီအီးအိုလက်ရှိအမြောက်အများအတွက်ငွေရှာပုံ. အဆိုပါကုမ္ပဏီများသည်လည်းသင့်ရဲ့လစာနှင့်အတူအမျိုးမျိုးသောအခွင့်အရေးနှင့်တကွသင်ပေးသွား.
ဆရာဝန်များကအရေးပေါ်အခြေအနေများအမျိုးအစားအားလုံးကိုအတွက်လိုအပ်သည်နှင့်သူတို့၏ကျွမ်းကျင်မှုလူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်အမြင့်ဆုံးတန်ဖိုးဖြစ်ပါသည်. သငျသညျဆေးပညာကျွမ်းကျင်ကြပြီးတာနဲ့, သင်တိုင်ပင်ကြေးကြီးမားတဲ့ငွေပမာဏမှတက်ကြွလာဘယ်မှာသင့်ကိုယ်ပိုင်ပုဂ္ဂလိကဆေးခန်းဖွင့်ဖို့ရှေ့ဆက်သွားနိုင်. ဆရာဝန်တစ်ဦးဖြစ်ခြင်းကိုသင်ပိုက်ဆံဆွဲယူဒါပေမယ့်လည်းလူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းဂုဏ်သတင်းကိုအများကြီးအားဖြင့်သင်တို့ကိုဆုပါဘူးမသာ. ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပညာရှင်များအမျိုးမျိုးသောအမျိုးအစားများမှာ, ဥပမာအားဖြင့်, ဆရာ, မျက်စိအထူးကုဆရာဝန်စသည်တို့ကို.
အိုင်တီစက်မှုလုပ်ငန်းလက်ရှိဖြစ်ထွန်းအောင်မြင်နေသည်. နည်းပညာတိုင်းကို manual လှုပ်ရှားမှုအစားထိုးမှုနှင့်အတူ, အိုင်တီဖြေရှင်းချက်ကြီးမားတဲ့ဝယ်လိုအားများမှာ. ဆော့ဖ်ဝဲနှင့်ကွန်ပျူတာအခြေပြု application အပေါ်မှီခိုတွေအများကြီးဒီရက်ရှိပါတယ်. ဒါကြောင့်, တစ်စိမ်းပေါင်းလဒ်ဝင်ငွေအခွင့်အလမ်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်.
Chartered ဘဏ်ဟာစာရင်းကိုင်နှင့် CFAs
စာရင်းကိုင်တိုင်းကုမ္ပဏီတခုအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဒြပ်စင်ဖြစ်ပါသည်. သင်ကအဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၏အရေးကြီးသောလိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်သကဲ့သို့သင်တို့တောင်းဆိုသလောက်ပေးဆောင်ရ. နဂိုအတိုင်းသူတို့ရဲ့စာအုပ်တွေစောင့်ရှောက်ရန်, စာရင်းစစ်လိုအပ်နှင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးစနစ်၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းနှစ်စဉ်ဘဏ္ဍာရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်းဖြစ်ပါသည်. ထို့ကြောင့်, CAS နှင့် CFAs စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ကြီးမားတဲ့နယ်ပယ်များ.
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုအပေးအယူအမျိုးမျိုးသောနေရာများမှာတံဆိပ်ခတ်, အဲဒီမှာအတော်လေးမကြာခဏပျံသန်းဖို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များနှင့်သာမန်လူတွေကနှစ်ဦးစလုံးအတွက်လိုအပ်အဘယ်ကြောင့်အရာဖြစ်ပါသည်. သူတို့ကလေယာဉ်ခရီးစဉ်အပေါ်ကြီးမားတဲ့ငွေပမာဏကိုသုံးစွဲဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ. အဆိုပါလေကြောင်းလိုင်းကဏ္ဍတစ်ခုမယုံနိုင်စရာမြန်နှုန်းမှာဖြစ်ထွန်းအောင်မြင်နေသည်. ဒါကြောင့်, လေယာဉ်မှူး, လေယာဉ်အမှုထမ်း, မြေပြင်ဝန်ထမ်း, လေထုအိမ်ရှင်မစသည်တို့ဝယ်လိုအားများမှာ.
Entertainment ကထိပ်ပေါ်သည်နှင့်တစ်ဖွဲ့လုံးကစီးပွားရေးကိုအကြီးအကျယ်သဘောတူညီမှုပံ့ပိုးသည့်စက်မှုလုပ်ငန်းဖြစ်ပါသည်. သရုပ်ဆောင်တွေနဲ့တူအံ့သြဖွယ်ပမာဏနှင့်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များနှင့်အတူတပ်မက်ဘွယ်ကောင်းခြင်းစက်မှုလုပ်ငန်းအပေးအယူ, မော်ဒယ်များ, အနုပညာရှင်ကြော်ငြာမှတဆင့်ကင်းစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်၎င်းတို့၏အခန်းကဏ္ဍကနေကြွယ်ဝချမ်းသာကြီးမားတဲ့သဘောတူညီချက်ထိုညီအစ်ကို. သူတို့ကိုယ်တိုင်ဘို့လမ်းရာ၌ခန့်ထားပြီပြီးတာနဲ့, မိုဃ်းကောင်းကင်ကသူတို့ရဲ့န့်သတ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်.
ဤမျှလောက်များစွာသောဆိုင်းငံ့ဖြစ်ပွားမှုနှင့်အတူ, ရှေ့နေများကြီးမြတ်ဝယ်လိုအားလည်းရှိပါတယ်. ဥပဒေသငျသညျနည်းမှန်လမ်းမှန်ကိုရွေးချယ်ပါနှင့်သင့်အခြေခံမူကပ်လျှင်ရသောလယ်ဖြစ်ပါသည်, သငျသညျဥစ္စာဓနနှင့်စိတ်ကျေနပ်မှုနှစ်ဦးစလုံးဝင်ငွေတက်အဆုံးသတ်. သငျသညျလမ်းလွဲစေခြင်းငှါလာသောအခါကြိမ်ရှိပါတယ်. ကနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်ရှိခြင်းခက်ခဲသည်. သို့သျောလညျး, သငျသညျဂုဏ်အသရေနှင့်အတူချီးမြှင့်ရ, ထိုနေ့၏အဆုံးမှာအကြိုးခံစားခှငျ့မြားနှငျ့ပိုက်ဆံ.
အားကစားလူတိုင်းအတွက်လက်ဖက်ရည်တစ်ခွက်မဟုတ်ပါဘူး. သင်တို့မူကားပါရမီဖြစ်ကြပြီးညာဘက်ကိုသင့်ရဲ့ငယ်စဉ်ကလေးဘဝထဲကနေအကောင်းအားကစားကျွမ်းကျင်မှုဆည်းပူးလျှင်, သင်ရုံသည်ထိုလယ်၌ကိုယ်အဘို့တခုဝိသေသလက္ခဏာစေရန်ရှိသည်. ဒါဟာလွယ်ကူတဲ့အလုပ်မဟုတ်ပါဘူး, ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်. ဒါပေမဲ့, သငျသညျထိုလယ်၌သင့်ရဲ့အထောက်အထားကိုအောင်တခါ, သင် play အဆိုပါဂိမ်းထဲကနေပေမယ့်လည်းစီးပွားရေးကြော်ငြာများနှင့်ကြော်ငြာလုပ်နေတာမှမဟုတ်ပဲငွေရှာ. ဤသည်ကိုလည်းအလွန်ကောင်းသောထုံးစံ၌ကျော်ကြားမှုမှဦးဆောင်.
အထက်ပါထိပ်များမှာ 8 သငျသညျတစ်ချိန်တည်းမှာအကျိုးအမြတ်လစာနှင့်ဂုဏ်သတင်းနှင့်အတူကောင်းကြီးမင်္ဂလာသည့်အတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်ရွေးချယ်စရာများ. သို့သျောလညျး, ခက်အလုပ်တွေအများကြီး, အပျနှံနှင့်လက်ျာလမ်းစဉ်ကိုအောက်ပါလိုအပ်ပါသည်.
« မင်္ဂလာသြစတြေးလျနေ့က 2018 ဆန္ဒ, quotes, စာတို, မက်ဆေ့ခ်ျ, ပုံရိပ်တွေ, အဝတ်အစား